Izinqolobane zokubhala ghost - Ilungelo Lethu lase-US Lokwazi
Ama-imeyili Adalula Umshicileli Wezesayensi Athole Amaphepha Ngokuphepha Kwe-Herbicide Kufanele Ahoxiswe Ngenxa YeMonsanto Meddling
Posted on August 23, 2019 by UCarey Gillam
Ithonya eliyimfihlo likaMonsanto kusethi yamaphepha ashicilelwe kumagazini wesayensi Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology bekungafanele neze ukuthi uphenyo olwenziwe ngumshicileli luthole ukuthi okungenani amaphepha amathathu kumele ahoxiswe, ngokusho kochungechunge lwezokuxhumana kwangaphakathi. Umhleli wephephabhuku wenqabile ukuhoxisa amaphepha, athi akunankinga yomdlavuza ngemithi yokubulala ukhula yenkampani, ethi ukuhoxiswa kungaba nomthelela esivivinyweni sokuqala seRoundup ehlobo eledlule futhi kulimaze idumela lababhali, ama-imeyili akhombisa.
Iphephabhuku ukuxhumana kwezokuxhumana kwatholakala ngokutholwa ngabameli abamele izinkulungwane ezimbalwa zabantu Umangalela uMonsanto ngaphezulu kwezimangalo zokuthi imishanguzo yokubulala ukhula esekwe eglyphosate idala umdlavuza nokuthi iMonsanto ifihle ubufakazi bezingozi.
Ngokungafani nalokho ama-imeyili angaphakathi eMonsanto okuze kwavela manje kwembula ukusetshenziswa kwenkampani yezolimo ngemibhalo yesayensi mayelana nokubulala ukhula kwayo, lawa ma-imeyili abonisa impi yangaphakathi endlini enkulu yokushicilela ngokwesayensi yokuthi kufanele ibhekane kanjani nokugxambukela kukaMonsanto. Batholakala njengengxenye yokufakwa kukaRoger McClellan, umhleli wesikhathi eside oyinhloko yephephabhuku elibukezwe ngontanga iCritical Reviews in Toxicology (CRT.)
Amaphepha okukhulunywa ngawo ashicilelwa yiCRT ngoSepthemba 2016 njengo “Ukubuyekeza Okuzimele ” amandla we-carcinogenic we-ejenti yokubulala ukhula i-glyphosate, isithako esiyinhloko ku-Roundup herbicide kaMonsanto neminye imikhiqizo. Amaphepha amahlanu ashicilelwe njengengxenye yokubuyekezwa aphikisana ngqo nokutholwe yi-World Health Organisation's International Agency for Research on Cancer (IARC), okuthe ngonyaka ka-2015 kwatholakala ukuthi i-glyphosate ingase ibe yisifo somdlavuza womuntu. Ababhali abali-16 bamaphepha baphethe ngokuthi isisindo sobufakazi sikhombise ukuthi umbulali wokhula wayengabeki ubungozi emzimbeni womuntu.
Ekupheleni kwamaphepha abalobi bathi iziphetho zabo zazingenelele ukungenelela kukaMonsanto. Kugcizelelwa ukuzimela komsebenzi, isimemezelo senzalo sathi: “Abekho abasebenzi benkampani yaseMonsanto noma abameli ababuyekeze noma imiphi imibhalo yesandla ye-Expert Panel ngaphambi kokulethwa kulo magazini.”
Leyo nkulumo iboniswe ingamanga ekwindla ka-2017 ngemuva kokuvela kwamarekhodi angaphakathi eMonsanto kukhombisa ukuzibandakanya okukhulu ngososayensi baseMonsanto ekubhalweni nasekuhlelweni kwamaphepha kanjalo nokubandakanyeka kwenkampani ekukhetheni ababhali. Ngokwengeziwe, amarekhodi angaphakathi akhombisa izinkokhelo eziqondile okungenani kubabili ababizwa ngokuthi ababhali abazimele. UMonsanto wayenenkontileka nombhali uLarry Kier, ngokwesibonelo, ukumkhokhela u- $ 27,400 ukusebenza emaphepheni.
Ukuphendula lezo zambulo nemibuzo evela ezitolo zabezindaba, umshicileli weCRT UTaylor noFrancis Group yethule uphenyo ekwindla ka-2017. Ezokuxhumana ezisanda kukhishwa ziveza ukuthi ngemuva kokuchitha izinyanga bebuza ababhali ukuthi amaphepha ahlangana kanjani, iqembu labachwepheshe bezomthetho nokuziphatha elihlanganiswe nguTaylor & Francis baphetha ngokuthi ababhali bakufihlile ukubandakanyeka kukaMonsanto ngqo emaphepheni, futhi ukwenze lokho azi. Ngempela, abanye ababhali abadalulanga ngisho ngokuphelele ukubandakanyeka kweMonsanto ekubuzweni kokuqala nguTaylor noFrancis ngesikhathi sophenyo, ama-imeyili akhombisa.
Umphumela “wokusebenziseka kuphela ukuhoxisa ama-athikili ama-3; ikakhulukazi amaphepha afingqiwe, obhubhane nezifo ze-genotoxicity, ”uCharles Whalley kaTaylor noFrancis ubhalele uMcClellan ngoMeyi 18, 2018. UWhalley wayephethe umhleli wephephabhuku lezokwelapha nezempilo leqembu ngaleso sikhathi.
Ama-imeyili angaphakathi akhombisa ukuthi uMcClellan wenqabile ukwamukela umqondo wokuhoxa, ethi ukholelwa ukuthi amaphepha "ayezwakala ngokwesayensi" futhi akhiqizwa "ngaphandle kwethonya langaphandle" elivela eMonsanto. Uthe ukuhoxa kuzodicilela phansi isithunzi sababhali, iphephabhuku nesithunzi sakhe.
"Angikwazi ukuvumelana nesiphakamiso sokuhoxa osinikeze kumemo yakho kaMeyi 18, UMcClellan wabhala ephendula. Ochungechungeni lwama-imeyili uMcClellan wabeka izizathu zakhe zokuphinda ahoxiswe, ethi "Ukuhoxiswa kwamaphepha kuzokwenza ukulimala okungenakulungiseka emaqenjini amaningi kubandakanya, ngaphezu kwakho konke, ababhali, iJenali, umshicileli kanye nabasebenzi abaphambili abanjengawe futhi, ngaphezu kwalokho , nami endimeni yami njengoMhleli Wezesayensi we-CRT. ”
Ku-an imeyili yangoJuni 5, 2018, UMcClellan umemezele ukuthi wayazi ukuthi uMonsanto "unentshisekelo yakhe" ekushicilelweni kwamaphepha futhi wayebazi mathupha ubudlelwano bukaMonsanto, kubandakanya nezivumelwano zokunxeshezelwa, nababhali, futhi wayesenelisekile ukuthi amaphepha "ayezwakala ngokwesayensi."
"Ngokombono wami wobungcweti, amaphepha amahlanu eGlyphosate ayizicucu zemisebenzi ebhala ngokusobala inqubo esetshenzisiwe ukugxeka umbiko we-IARC nokuhlinzeka ngenye indlela yokubeka ingozi," kubhala uMcClellan. “Amaphepha amahlanu anengqondo ngokwesayensi. Kungaba ukwephula izimiso zokuziphatha zesayensi kanye nezindinganiso zami zobuqotho besayensi ukuvuma ukuhoxiswa kwanoma imaphi amaphepha eGlyphosate… ”
UWhalley wahlehla, ethi ababhali bamaphepha babenecala "lokungaziphathi kahle nokwephula izimiso zokuziphatha zokushicilela," okunzima kangangoba kufanele kuhoxiswe. “Ukwephulwa kwezimiso zokushicilela esizitholile kuleli cala kungukwephula okusobala kwamazinga ayisisekelo futhi achazwe ngokusobala, futhi akubangelwa ukungaqondi kwemininingwane noma i-nuance,” uWhalley ubhalele uMcClellan. Uthe umshicileli ubuyekeze izinkombandlela ezivela kwiKomidi Lezokuziphatha Komphakathi (COPE) ngaphambi kokuthatha lesi sinqumo. "Ukuhlehlisa kungubufakazi bokuthi izinqubomgomo zokuhlela ziyasebenza, hhayi ukuthi zehlulekile," wabhala.
UWhalley noMcClellan baphikisana ngokuhoxiswa izinyanga, amarekhodi akhombisa. Kokukodwa Julayi 22, 2018 i-imeyili UMcClellan uveze ukuthi Icala lokuqala elibhekene neMonsanto ngenxa yezimangalo zomdlavuza weRoundup zazenzeka ngaleso sikhathi ngakho izingxoxo zephephabhuku zokuhoxiswa "zazizwela impela njengoba icala likaJohnson noMonsanto liqhubeka eSan Francisco." Uphakamise ukuthi esikhundleni sokuhoxisa amaphepha, bavele balungise isigaba esisekugcineni kwamaphepha lapho ababhali beveza khona ukungqubuzana okungaba khona.
"Ngiyaninxusa ukuba nivumelane nesincomo sami sokushicilela izitatimende eziqondisiwe nezandisiwe zeSimemezelo Sentshisekelo futhi niyeke indlela" we gotcha "neRetraction yamaphepha," uMcClellan ubhalele uWhalley nge-imeyili kaJulayi 2018. "Ngeke ngivume ukuthi isithunzi sami engisizuze kahle singcoliswe yizenzo zokucindezela nokwenza izinto ezingenamqondo."
“Kulokhu, sidinga ukuthi sonke ngokuhlanganyela sizame ukufinyelela esivumelwaneni ngomphumela wokulingana okuyi-FAIR kubabhali, umshicileli, abafundi be-CRT, umphakathi kanye nami njengoMhleli Oyinhloko kanye nebhodi labahleli be-CRT. Akumele sithathe indlela enquma abawinile nabangahlulwa emacaleni asemthethweni ngokuya ngokuthi yini evunyelwe ukuvela ezincwadini ezibukeziwe zontanga, ”kubhala uMcClellan.
Akekho uMcClellan noWhalley abaphendulile esicelweni sokuphawula maqondana nale ndatshana.
Uchungechunge lweCRT glyphosate lwaluthathwa njengolubaluleke kakhulu kangangokuba okutholakele kwalo kwabikwa kabanzi ngabezindaba emhlabeni jikelele futhi kwafaka ukungabaza ngobuqiniso bokuhlukaniswa kwe-IARC. Amaphepha ashicilelwe ngesikhathi esibucayi njengoba uMonsanto wayebhekene nokungabaza ngabalawuli baseYurophu ngokuvumela i-glyphosate ukuthi ihlale emakethe futhi ikhule ngokungazinzile ezimakethe zase-US. Uchungechunge lwe-2016 "lufinyeleleke kabanzi," kanti elinye lamaphepha kulolu chungechunge lifinyelele "ngaphezu kwesikhathi esingu-13,000," ngokusho kwephephandaba langaphakathi.
Ukubaluleka kwamaphepha eMonsanto kwachazwa embhalweni oyimfihlo wangomhlaka-11 Meyi 2015, lapho ososayensi baseMonsanto bekhuluma ngamasu "okubhala izipoki" azoboleka ukwethembeka emaphepheni "azimele" inkampani efuna ukuwakha bese ukuthi ishicilelwe yiCRT. IMonsanto umemezele ngo-2015 ukuthi kwakuqasha i-Intertek Scientific & Regulatory Consultancy ukuhlanganisa iphaneli lososayensi abazimele abazobuyekeza ukuhlukaniswa kwe-glyphosate kwe-IARC njenge-carcinogen engaba khona. Kepha inkampani ibithembise ukuthi ngeke ibambe iqhaza ekubuyekezweni.
Yize ukubandakanyeka kukaMonsanto kwembulwa ku-2017 Taylor & Francis bengathathanga zinyathelo zomphakathi kwaze kwaba nguSepthemba 2018 njengoba umshicileli nomhleli babambana ngodaba lokuhoxa. UMcClellan wagcina eyinqobile impikiswano futhi akukho ukubuyiselwa emuva okwenziwe. Ama-imeyili angaphakathi akhombisa ukuthi uWhalley wazise abalobi abangu-16 bamaphepha e-glyphosate ngesinqumo sokumane bashicilele ukulungiswa kwezihloko futhi bavuselele izimemezelo zentshisekelo ekugcineni kwamaphepha. Lowo Agasti 31, 2018 i-imeyili ithi:
“Siyabona ukuthi, ngaphandle kwezicelo zokudalulwa ngokugcwele, izitatimende zokuqala zokuBonga kanye neSimemezelo Sezintshisekelo azimelanga ngokugcwele ukubandakanyeka kweMonsanto noma abasebenzi bayo noma osonkontileka ekubhalweni kwalezi zihloko. Njengoba kushiwo kumamemos wethu wangaphambilini kuwe, lokhu kuqondene ngqo nezitatimende ezithi:
'Abekho abasebenzi benkampani iMonsanto noma abameli ababuyekeze noma yiliphi i-Expert Panel's imibhalo yesandla ngaphambi kokulethwa kulo magazini. ' nokuthi 'Abachwepheshe bamaPhaneli babebandakanyeka, futhi basebenza njengabaluleki ku, lntertek, futhi abathintwanga ngqo yiNkampani yeMonsanto. '
“Ngokolwazi osinikeze lona, ​​manje sesiyakholelwa ukuthi kulezi zitatimende bekungekho iqiniso ngesikhathi sokulethwa. Lokhu kungqubuzana nezimemezelo ozenzile ekuthumeleni kanye nakwiziqinisekiso ozenze kuzivumelwano ze-Author Publishing Agreements mayelana nokuhambisana kwakho nezinqubomgomo zikaTaylor & Francis. Ukuhlinzeka ngokusobala okudingekayo kubafundi bethu, sizoshicilela ukulungiswa kuma-athikili akho ukuvuselela izitatimende zabo zokubonga kanye nesimemezelo sezintshisekelo njengokuqukethwe okunikezile. ”
NgoSepthemba ka-2018 amaphepha abuyekezwa ukuze aphathe i- “Expression of Concern” kanye nokuvuselelwa kokwamukelwa nokumenyezelwa kwezintshisekelo. Kepha ngaphandle kokutholakala kokubandakanyeka kukaMonsanto, amaphepha asabizwa ngegama elithi "ukuzimela."
UWhalley ushiye uTaylor noFrancis ngo-Okthoba ka-2018.
Indlela iphephabhuku elisingatha ngayo lolu daba ibakhathaze abanye ososayensi.
"Ukuphawula kukaMcClellan ngokuthi kungani engazange ahoxise leli phepha bekungamukeleki, kuzenzela yena uqobo, futhi kwephula inqubo yokuhlelwa komsindo," kusho uSheldon Krimsky, onguprofesa waseTufts University futhi osebenza eHastings Centre, okuyisikhungo esizimele sokucwaninga nge-bioethics. UKrimsky ubuye abe ngumhleli wephephabhuku likaTaylor noFrancis elibizwa nge- "Accountability in Research."
UNathan Donley, usosayensi omkhulu oqashwe yi-nonprofit Centre for Biological Diversity uthe ukwehluleka kwephephabhuku ukuhoxisa kwaba wukwehluleka ukwenza izinto obala. "Lesi ngesinye sezigameko eziyihlazo kakhulu ekushicilelweni kwesayensi engake ngazibona," kusho uDonley. “Esisele nakho ukukhombisa ukukhathazeka ukuthi akekho umuntu ozofunda kanye nomqondo omubi ocacile wokuthi lokhu ngandlela thile bekuyindlela 'ezimele'. Lokhu kube yimpumelelo kumdlali onamandla kunabo bonke embonini yezibulala-zinambuzane, kodwa kwaba umphumela wokuziphatha kwesayensi. ”
Chofoza lapha ukuze ufunde amakhasi angama-400 wokuhlanganisa ama-imeyili.
I-Monsanto Roundup Trial Tracker ezolimo, Bayer, umdlavuza, Ukubuyekezwa Okubalulekile ku-Toxicology, EPA, ukulima, FDA, Ukudla, ukubhala, glyphosate, amaphephandaba, Monsanto, izibulala-zinambuzane, RoundUp, isayensi, UTaylor noFrancis
Icala le-SF Roundup likhombisa ukubaluleka kokuzimela ebufakazini besayensi
Posted on August 30, 2018 by USusan Lang
Lesi sihloko sashicilelwa ekuqaleniSanFranciscoChronicle.
NguNathan Donley noCarey Gillam
Sekuphele amasonto amathathu kusukela ijaji laseSan Francisco okutholiwe Ukuchayeka emithini yokubulala ukhula kaMonsanto i-Roundup kwaba nomthelela kulowo owayengumgcini wesifo somdlavuza waseDewayne “Lee” Johnson futhi wakhipha isamba semali esiyizigidi ezingama- $ 289 kumonakalo owabekwa ubaba oneminyaka engu-46. Futhi phakathi naleso sikhathi, sibone iziqinisekiso eziphindaphindwayo ezivela ku-giant pesticides kanye nabalingani bayo ukuthi, empeleni, ijaji lalingalungile futhi umbulali okhetha ukhula wezigidi zabantu baseMelika uphephe ngokuphelele.
Iphini Likamongameli weMonsanto uScott Partridge ephindaphindiwe imantra ejwayelekile: Amakhulu ezifundo zesayensi, kanye nokubuyekezwa kwezinhlangano ezilawulayo emhlabeni wonke, kufaka phakathi ne-US Environmental Protection Agency, bathole ukuthi i-glyphosate - isithako esisebenzayo eRoundup - ayibangeli umdlavuza. Umnikazi omusha weMonsanto, uBayer AG, waqhubekela phambili. Isikhulu esiphezulu seBayer uWerner Baumann utshele abatshalizimali ukuthi amajaji avele nje "akulungile" nokuthi iBayer izosebenza ukuqinisekisa ukuthi ukuthengiswa kwemikhiqizo ebulala ukhula akuphazamiseki. "Izifundo ezingaphezu kuka-800 zesayensi nokubuyekezwa" kusekela ukuphepha kwe-glyphosate, utshele abatshalizimali.
Ngaphandle kokuphikiswa, amaphuzu okukhuluma acijwe ngokucophelela azwakala ehlaba umxhwele futhi enesiphetho - njengoba nje kuhlosiwe.
Kepha ngemuva kokuklonyeliswa kwabasizi bejaji, abantu abaningi kulo lonke elase-United States abebefafaza umuthi wokubulala izinambuzane otshanini nasemasimini abo iminyaka bayangabaza lawo mazwi aqinisekisayo. Futhi ngesizathu esihle.
Ukuqinisekiswa kokuphepha kwebhizinisi kushiya igama elilodwa elibalulekile - igama elibaluleke kakhulu kunoma ngubani ofuna ukuthatha isinqumo esinolwazi mayelana nobungozi bomdlavuza obuhambisana neRoundup kanye namakhulu amanye ama-herbicides asuselwa eglyphosate emakethe.
Lelo gama “lizimele,” njengokuthi “izifundo ezizimele zesayensi nezibuyekezo.”
Njengoba kubekiwe ecaleni, kunobufakazi obuningi, obuningi babo buvela ngaphakathi kwemibhalo yangaphakathi kaMonsanto, echaza ukuthi ucwaningo oluningi oluphakamisa ukuthi i-Roundup iphephile luhlelwe kanjani futhi / noma luthonywe yiMonsanto kanye nababambisene nayo embonini yamakhemikhali .
Kepha ucwaningo oluzimele ngempela lukhombisile ukuthi kunesizathu sokukhathazeka. Njengokusetshenziswa kwe-Roundup emapulazini ase-US, utshani bokuhlala nezingadi ukukhuphuka kusuka kumaphawundi acishe abe yizigidi ezingama-40 ngonyaka kuma-1990s kuye cishe kumaphawundi ayizigidi ezingama-300 eminyakeni yamuva nje, ubungozi bekhemikhali buye babhalwa ezifundweni eziningi ezibuyekezwa kontanga.
Kwakuyileyo misebenzi ezimele nebuyekezwa kontanga eyaqinisekisa ingalo yocwaningo lomdlavuza ye- World Health Organization ukunquma ukuthi i-glyphosate iyi-carcinogen yabantu. Ngemuva kokutholwa yi-WHO, ICalifornia yengeze i-glyphosate ohlwini lukahulumeni lwamakhemikhali abangela umdlavuza.
Impendulo kaMonsanto kulokho kuhlukaniswa kwe-2015 kwaba isayensi esetshenzisiwe kakhulu. An "Isibuyekezo esizimele" Ye-glyphosate ikhonjiswe kumagazini wesayensi obuyekezwa ontanga echaza ukuhlukaniswa kwe-IARC. Ukubuyekezwa akugcini nje ngokubizwa ngokuthi kuzimele, kepha kumenyezelwe ukuthi akekho umsebenzi waseMonsanto obeneqhaza ekubhalweni kwalo. Kodwa-ke ama-imeyili angaphakathi enkampani, aphendulwa ekutholakaleni okuhambisana namacala, aveza ukuthi usosayensi waseMonsanto empeleni wayenolaka ukuhlelwa futhi ibuyekeze ukuhlaziywa ngaphambi kokushicilelwa kwayo.
Lesi esinye sezibonelo eziningi eziningiliziwe emibhalweni engavaliwe yemizamo efanayo, ebizwa ngabasebenzi bakaMonsanto ngokuthi “ukubhala. "
I-EPA ihlanganyele neMonsanto phezu kososayensi abazimele, ukumemezela ukuthi i-pesticide kungenzeka ukuthi ingabangeli umdlavuza. Ngokwenza lokhu, le nhlangano ilishaye indiva iqiniso elivezwe yiHhovisi Lezokucwaninga Nentuthuko ungazi ngokuphathwa kwe-EPA kokuhlolwa kwe-glyphosate, njengoba kwenza i iphaneli yokweluleka ngokwesayensi ebizwe yi-ejensi ukubuyekeza ukubuyekeza ukuhlolwa.
Mhlawumbe akumangalisi ukuthi nobufakazi becala bufakiwe ukuxhumana echaza okungachazwa njengokusebenzisana okuthokomele phakathi kweMonsanto nezikhulu ezithile ze-EPA.
AbaseMelika bafanelwe okungcono kubalawuli babo, okufanele bakubeke phambili ukubeka impilo yomphakathi kude kunenzuzo yezinkampani.
Esikhundleni salokho, kudinge indoda enesibindi ebulawa ngumdlavuza kanye nejaji lezakhamizi ezijwayelekile eziyi-12 ukuthi isukume ibhekane nenselelo yokubhekisisa amaqiniso esayensi nokubiza ubulungiswa.
izibulala-zinambuzane, Ukukhangisa Bayer AG, Environmental Protection Agency, EPA, ukubhala, glyphosate, Monsanto, RoundUp, UScott Partridge, UWerner Baumann